Mmemme Office nke Virtual, makwaara dị ka Mmemme Isi ụlọ ọrụ
Officelọ ọrụ na-ewu ewu bụ ọrụ na-enye adreesị nzipu ozi na ọrụ nnabata ekwentị. Companylọ ọrụ na-eji ọrụ anaghị arụ ọrụ ọfịs ahụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji adresị ụlọ ọrụ kwalite asụsụ ọma. N'ihi nke a, ọrụ a na-enye nnukwu ego karịa ohere ọrụ ọfịs na nke nnabata. Na mgbakwunye, ọtụtụ ndị na-eji nhazi a maka nzuzo ego. Nke ahụ bụ, yabụ ejiri akụ na ụlọ ọrụ ma ọ bụ LLC agbanyeghị na adresị nwe onye nwe ya ma ọ bụ onye isi ya.
Mmemme Office Virtual bụ dị na steeti 50 US niile na ọtụtụ ndị mba ọzọ.
Ndi Nominee na ndi Odu
Ọrụ nzuzo nzuzo Nominee bụ ebe otu n'ime ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ pụtara na ndekọ nke ọha ka ndị ọrụ gị na ndị isi nke ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ onye njikwa nke LLC gị. Na-achịkwa ikike site na ijide ikike ịtụ vootu niile, site na ịnwe ụlọ ọrụ. Ọkachasị, inwere ihe dị n’aka gị igosi na ụlọ ọrụ bụ nke gị. Agbanyeghị, mgbe ahụ mmadụ ga - elele ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ aha gị na ndekọ ọha, ha ahụghị njikọ ọ bụla n'etiti gị na ụlọ ọrụ gị. Yabụ, ịnwere ike ịnwe nnukwu ego ụlọ akụ ma ọ bụ mebie aha ụlọ ọrụ gị. Chịkọta anya agaghị adị mfe.
Na mgbakwunye, ọ nwere ike ịnwe gị ezigbo ụlọ. Yabụ, kedu ihe onye ọka iwu na-ahụ maka ego agụụ na-ahụ mgbe ọ na-achọ akụ gị? Obere ihe. Money nwere ego zuru oke na akụ ndị ọzọ kpughere iji mee ka ọnụ ahịa gị baa uru? Eleghị anya ọ bụghị, ọ bụrụ na ịnwere akụ gị na ngwaọrụ iwu ziri ezi.
Uru Uru Virtual Office
Enwere ọtụtụ uru pụta ụwa mgbe ị gụnye mepụta LLC. Nke a bụ ikpe kachasị mgbe ị na-etolite Nevada ma ọ bụ Wyoming LLC nwere ụlọ akụ. Nke a bụ n'ihi na iwu nchekwa ngwa ahịa na ikike abụọ a karịa karịa steeti ndị ọzọ. Enwere uru nchekwa nchekwa dị ukwuu karịa na oke oke mmiri, dịka nke Nevis LLC. Nke kachasị, jiri iwu na-echebe ndị na-eketa òkè, ndị isi na ndị isi. Nevada na Wyoming bụ ihe kachasị ike na US. Na mgbakwunye, enweghị ụtụ isi ego obodo na steeti ndị a. Nevis bụ ike n'ụwa niile. N’otu aka ahụ, enweghi ụtụ isi ego na mpaghara a ma ama. Ugbu a, a na-atụ ndị US ụtụ isi na ego ha na-enweta n'ụwa niile, yabụ nke ahụ pụtara na enweghị ụdị ụtụ isi ego ọzọ iji tinye aka na ikike ahụ.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji Nevada, Wyoming ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị dị n'akụkụ mmiri maka isi ihe ndị a:
Nwere ike rụọ ọrụ na steeti ha, ma ọ bụ,
To Ichekwa akụ nke onwe gị yana imeba nzuzo na nzuzo
Ihe abụọ a nwere ike ịbara gị uru nke ukwuu. Mana enwere usoro ị ga - eme iji hụ na ị hụrụ uru ị na - atụ anya. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịkwalite uru ndị a site na ịtinye ọrụ ndị a họọrọ iji mee ka nzuzo gị dị ka anyị tụlere n’elu.
Nevada ma obu Wyoming Corporation di n’ulo nke gi
Formedlọ ọrụ emepụtara na nke ọ bụla n'ime steeti 50 nwere ike iduzi azụmahịa na steeti niile. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị bi na California ma nwee ụlọ ọrụ na-ebubiga ụgbọ ala. Chọrọ iwelata ụgwọ ụtụ isi gị ma nye nchebe ọzọ maka akụ gị. Yabụ, ị kpụrụ Nevada Corporation maka ụlọ ọrụ na-ebubiga ụgbọ mmiri gị, mgbe ahụ denye aha na California dị ka ụlọ ọrụ si mba ọzọ. A maara nke a dị ka "ntozu nke mba ọzọ." Steeti California na-atụ ụtụ ego ọ bụla enwetara na steeti ahụ.
Agbanyeghị, ụlọ ọrụ gị ka nwere ike ịnwe ọnọdụ ụtụ isi na Nevada na ego ọ bụla enwetara na steeti ahụ. Otu a na-aga maka steeti ọ bụla ọzọ ebe ọ na-arụ ọrụ nke nwere ụdị iwu ụtụ isi na ụtụ isi, ma ọ bụ na enweghị “iru ala ọzọ” chọrọ. Ka i wee rite uru n'ụtụ isi a, ọ ga-abụ azụmahịa “bi” ya. Ihe ndị anyị depụtara n'okpuru ga-ekpebi nke a.
Mụbaa Nzuzo na echebe
Nelọ ọrụ Nevada na-enye nzuzo nzuzo na-enweghị atụ na nchedo oke ọnụ ahịa maka ndị isi, ndị isi na ndị nwere akụ (ndị nwe). Site n'ụkpụrụ iwu, a gaghị enwe ndị na-ebugharị ego, ma ọ bụ ndị isi / ndị isi nwere ụgwọ maka ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla nke ụlọ ọrụ Nevada. Ma aha ndị nwere akụ na aha abụghị ihe ndekọ ọha. Naanị ndị isi na ndị nnọchite anya bụ ihe gbasara ndekọ ọha. Otu onye nwere ike ịhazi ọru ndị a na nzuzo. Site na iji nhọpụta ndị ahọpụtara, dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike ime ka nkwalite nzuzo na nzuzo nke ndị nwe "ezigbo" nke ụlọ ọrụ ahụ. Iji ọrụ Nominee anyị tụkwasịrị obi, ị ga-ejikwa n'aka na a ga-echebara aha gị anya nzuzo.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịkwụ ụfọdụ ụgwọ azụmahịa gị na uru itinye ego na Nevada Corporation gị. Nke a nwere ike iwelie nzuzo ma chebe akụ. Otu ga-emezu nke a site na ịmalite ụlọọrụ na steeti ụlọ gị, ọzọ ụlọ ọrụ ọzọ na Nevada. Enwere ike iji ụlọ ọrụ Nevada megharịa ma nata ego site n'aka Corporationlọọrụ obodo gị. N'ihi ya, azụmahịa ị na-arụ na steeti ala gị nwere ike iresị ụlọ ọrụ gị na Nevada. Nke a nwere ike ịbụ ihe dịka njikwa, nyocha, ma ọ bụ maka ire ngwa ahịa, wdg.
Na-emezu ihe achọrọ ọnụnọ nke anụ ahụ
N ’ihi na i gha emebela ulo oru gi nke oma dika onye bi n’ime Nevada (iji sisitemu Nevada Office nke di nfe ma obu oru Nevada) ma dozie nhọpụta onye isi nnochita site na Nzuzo Nominee, ulo oru gi ga enweta ego ya n’echebe. ya na izu oke. Ga - enwe ike ịkwụ ụgwọ onwe gị site na Nevada Corporation. N'ihi na ụtụ isi gọọmentị etiti nke Corporationlọ Ọrụ C dị obere karịa ọnụego nke onwe gị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụtụ isi niile, ị nwere ike ịchọpụtakwu usoro ịtụ ụtụ ego. (Ọzọ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na steeti nwere ụtụ ego ụlọ ọrụ, ọ ga-agbaso iwu ụtụ isi nke steeti ọ na-arụ ọrụ. onye ndụmọdụ).
Ihe atụ ọzọ: Ọ bụrụ n’inwe ego dị ukwuu n’ahịa azụmaahịa, ịnwere ike ibụ ụlọ ọrụ Nevada Limited Liability (“LLC”) iji jide njide ego ndị a. Nwere ike ịhazi ụlọ ọrụ gị na Nevada ka ọ nwee ike ijikwa ego ndị a, ma kwụọ ụgwọ "maka ọrụ njikwa ego" na ụlọ ọrụ gị na Nevada site na itinye ego ndị a site na LLC. N'oge a, aha gị agaghị edebanye aha gị ka ị na-enweta ihe ndị a n'ego, ma ụtụ isi, na-ada oke ọnụ.
Kedu ihe mmemme Office Virtual?
Iji rite uru na nkwupụta nzuzo ego kachasị, ụgwọ dị oke mkpa, na nchedo ego nke Nevada Corporation nyere, ọ ga-emezu ụfọdụ ihe ndị chọrọ "obibi." Kwesiri inwe ike igosipụta nke ọma na ụlọ ọrụ gị bụ ọrụ iwu kwadoro, na-arụ ọrụ na Nevada.
Iji mee nke a, ọ ga-agafere ule anọ dị mfe:
Companylọ ọrụ ahụ ga-enwerịrị adreesị azụmahịa nke Nevada, yana ndị nnata, ma ọ bụ akwụkwọ nkwado dị ka ihe akaebe.
Ọ chọrọ nọmba ekwentị ekwentị azụmahịa Nevada. 
Ga-enwerịrị ikikere azụmaahịa Nevada
Corporationlọ ọrụ ma ọ bụ LLC ga-enwerịrị akaụntụ Nevada Bank nke ụdị ụfọdụ (ịlele, akaụntụ mebiri, wdg).
Mgbakwunye Office nwere Virtual
Dị ka ihe ndị a chọrọ si egosi, igbe PO PO nso ma ọ bụ ọrụ ịza agaghị ezu. Iji gafee muster, a ga-enwerịrị ebe obibi na - eku ume na-akwado ụlọ ọrụ Nevada gị. Ọnọdụ imeghe ma nwekwaa ọfịs bụ na ọ ga - adị oke ọnụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na inlọọrụ na Nevada bụ ndọtị nke mbelata ụtụ isi gị ma ị na - achọ ime ka itinye ego gị na ụlọ ọrụ gị belata. Mgbe ị na-emepe ụlọ ọrụ, ị ga-akwụ ụgwọ maka ụgwọ ụlọ, ndị ọrụ, akụrụngwa, ekwentị na ọrụ data, ụtụ isi ọrụ, onunu, na mkpuchi. Ka anyị tinye ha n'ọnọdụ “kwa ọnwa”:
Office mgbazinye $ 1500
Ekwentị & Data $ 100
mmezi $ 100
ọnọde $ 200
Estụ Isi Ọrụ $ 300
Total: $ 6000 ($ 72,000 / yr.)
Ọnụ ego ndị a gbakwunyere ọsọ ọsọ na mgbago $ 6,00 kwa ọnwa. N’ezie, ihe ndị a bụ atụmatụ ọnụego nchedo na - akwụtụ ụgwọ, ebe ihe ndị nwere ike isonye na-akwụ elu nke ukwuu. Mee 12 ka ogugu onu ogugu a, inwere ike ihu na ogugu “isi oru” ndi puru iche nwere ike ifu ulo oru gi $ 72,000 kwa afọ.
Mana anyị nwere ezi uche dị na ya iji gboo mkpa gị! Anyị nwere ike mezuo ihe ndị a niile maka ụlọ ọrụ gị na-amalite naanị $ 995 ka $ 2,995 maka afọ niile, dabere na ngwugwu ị họọrọ. Anyị Nevada ma ọ bụ Wyoming Office Mmemme (nke a makwaara dị ka Nevada ma ọ bụ Wyoming virtual office program), anyị nwere ike ị nye ụlọ ọrụ gị ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị na adresị azụmahịa (dị na oge atọrọ), ndị ọrụ ngo nyere n'oge awa ọrụ mgbe niile, onye na-ebi ndụ na-aza nọmba ekwentị ahịa gị (zigara gị), ọrụ nzipu ozi nkeonwe ahaziri gị na enyemaka iji mepee ụlọ akụ ma ọ bụ nkewa. Anyị na-enye ọrụ yiri nke ahụ n'ọtụtụ ebe ndị anyị nwere oke osimiri.
So na Mmemme Officelọ Ọrụ Nevada Corporate gụnyere:
· Adreesị Nevada nke bụ ezigbo - ndị ọrụ nwere ọrụ sitere na 8am ruo 5pm
Oge Oge Pacific rue Fraide.
· Ọrụ nzipu ozi na-egbo mkpa gị
· Nevada nwekọrọ ọnụ ekwentị zara site n'ụlọ nnabata
· Nọmba faksị Nevada
Nyere aka imepe ugwo na Nevada
Nyere aka itinye akwụkwọ ikike maka Nevada
Ndị ọrụ kwụrụ ụgwọ ga-ekele ndị na-akpọ gị n'oge ọrụ.
· Ọrụ notari
· Ọrụ odeakwụkwọ
Officelọ ọrụ ahụ jikọtara Nevada Virtual Office Mmemme ga-efu gị naanị $ 110 kwa ọnwa ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa na nkwa dịkarịrị otu afọ, mana ọzọ, ị nwere ike irite uru ego anyị $ 325 maka ịkwụ ụgwọ kwa afọ. Na-akwụ naanị $ 995 maka otu afọ ọrụ.
Ego n'elu Office ọgbakọ
Nchịkọta ndị a nwere ike ịchekwaa puku kwuru puku dọla na mmefu arụmọrụ, ebe ị na-echekwa ụgwọ ọrụ niile ị tara ahụhụ na nweta, belata mbelata ụtụ.
Mmemme poratelọ Ọrụ Nevada Anyị na-ezute ma na-emeju ụkpụrụ niile dị mkpa maka mkpebi ụlọ ọrụ Nevada bi. Na mgbakwunye, a na-ebunye ọrụ ndị a n'ọma ọrụ nwere ọgụgụ isi, enyi na enyi. Ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-enye ụdị ọrụ ndị a kemgbe ihe karịrị 30 afọ na-elekọta okwu gị. Yabụ, anyị nwere ike ịnye usoro ihe omume a n'ọfụma dị egwu n'ihi oke olu azụmaahịa na nzukọ zuru oke.
Enwere ike iji ọnụọgụ dị na peeji a ma ọ bụ ụdị edepụtara n'elu iji nweta ozi ndị ọzọ nke nhọrọ TAX SAVINGS na nhọrọ dị mma na Mmemme Office Incorporated Virtual Office.